::Rojgar Manch||Online Newspaper :: Employment Nepal News, Financial Nepal News, Nepal Breaking News, Nepali Latest News, Top Headlines News, National, Political News, Social, Sports, Economy, Business, Health, Entertainment, Nepali Movie, Nepali Music Video and World News, Nepal Bank News, business news, Bank Credit Profit, Sale, Nepal Tourism Year news, Vehicle loan, sale, Nepal Weather कमिशन मिलाउन श्रममन्त्री मलेसिया गएका हुन : न्यौपाने:: Rojgar Manch ::
शुक्रवार, २०७३ असार १७ गते २०:००
प्रज्ञान न्यौपाने, अध्यक्ष
मन्त्रीस्तरीय मलेसिया भ्रमणलाई कुनरुपमा लिनुभएको छ ?
पहिलो कुरा त हतारमा निर्णय गरेर मन्त्रीस्तरीय जुन भ्रमण भयो त्यसलाई शंकाको दृष्टिले मैले हेरेको छु । जेनेभाको भ्रमण लगत्तै मन्त्रीज्यू मलेसिया भ्रमणमा जानु त्यो पनि जाने अघिल्लो दिनसम्म पनि भिसा नलागेको अवस्थामा रातारात जान हतारिनुमा केही रहस्य पक्कै छ । मलेसिया रोजगारीका नाममा यति साह्रो हतारमा बिहीबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गराएर आइतबारसम्म पनि भिसा नलागेको अवस्थामा सोमबार नै जानैपर्ने अवस्था केही थिएन् । अर्को कुरा मन्त्रीज्यू भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ भनेर हामी व्यवसायीहरुलाई जानकारीनै दिइएको थिएन् । अन्तैबाट यसबारे जानकारी पाएपछि मन्त्रीज्यूलाई भ्रमणमा व्यवसायीहरुलाई पनि सहभागी गराउन अनुरोध ग¥यौ । सुरुमा त उहाँले व्यवसायीलाई सहभागी गराउन मान्नुभएन । तर, हामीले व्यवसायीहरु भ्रमणमा सहभागी गराउन किन हुदैन भनेर चर्काचर्कि नै गरेपछि ५ जना व्यवसायीलाई सो भ्रमणमा सहभागी गराउन उहाँ राजी हुनुभयो । तर जुन ढंगमा उहाँको मलेसिया जाने हतारो देखियो यसले ‘दालमा कुछ काला हे’ भन्ने संकेत गथ्र्यो ।
तर मलेसियाली अधिकारीहरुसँगको छलफलमा मन्त्रीस्तरीय टोलीले व्यवसायीहरुको प्रतिनिधीलाई वाइपास गरे नि ?
मन्त्रीज्यूले संघका अध्यक्षसहितका व्यवसायी प्रति जुन किसिमको व्यवहार देखाउनुभयो त्यो उहाँको ठुलो गल्ती हो । एक त सरकार १० हजारभन्दा बढि नलिइ कामदार पठाऊ भन्छ । तर मलेसियाले बायोमेट्रिक, भिएलएन, माइग्रामलगायत विभिन्न नाममा १८ देखि २० हजार असुलिरहेको छ । हामीले यस विषयमा संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध तथा श्रम समितिमा पनि आवाज उठायौ । यसले अलिकति प्रभाव पारेको थियो र त्यही विषयको वास्तविकता बुझ्न यो भ्रमणलाई अवसरका रुपमा लिएका थियौ । तर व्यवसायीलाई मन्त्रीज्यूले जसरी वाइपास गर्नुभयो यो उहाँ आफैका लागि घातक बन्न सक्छ । मन्त्रीज्यू आफुलाई निकै बाठो सम्झनुहुन्छ तर अहिलेको परिस्थितीमा उहाँ निकै लाटो लाग्यो मलाई । उहाँ नीतिगत निर्णय गरेर कामदार र सरकार दुवैलाई चलाखिपूर्वक ढंगमा ठगेर पैसा कमाउने दाउमा हुनुहुन्छ यो उहाँको ठूलो गल्ती हो ।
अर्को कुरा नी दिनेशजी, मन सफा हुनु प¥यो के । हाम्रो त मन्त्रालय नै कस्तो प¥यो कस्तो । राम्रा मन्त्री आउन नखोज्ने आएकाहरुमा कमाउने दाउ मात्रै । जबसम्म यो मन्त्रालयलाई हेला गरिन्छ र यहाँ आउने मन्त्री, कर्मचारी कमाउने नियतले मात्र आउँछन तबसम्म वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सुरक्षित हुन्छन जस्तो मलाई लाग्दैन । सायद अहिलेका मन्त्रीले अर्को पटक मन्त्री हुन्छु कि हुन्न, अहिले भएकै बेला कमाएरै जाऊ भनेर यो सब काम गर्दै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो ।
मलेसियामा पैसा कमाउनेको गिरोहनै छ । अनि ति गिरोहसँग मिलेर नीतिगत निर्णय गर्दै करोडौ कुम्ल्याउन पल्केका अहिलेका मन्त्री र कर्मचारीले व्यवसायीलाई किन वार्तामा सहभागी गराउथे । त्यसैले सँगै गएका व्यवसायीलाई वार्तामा सहभागी नगराउनुमा त्यहाँ नीतिगत भ्रष्टाचार छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
कस्तो बिडम्बना है, वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित बनाउन तपाईहरु र मन्त्रालयबीच सहकार्य, सहमति हुनुपर्नेमा एकले अर्कालाई आरोप लगाउने र वाइपास गर्ने खेलमै सीमित हुनुहुन्छ है ?
सुन्नुस न, हामीले त राम्रो कुरा गरेपनि यहाँ जनमानस तथा नेताहरुलाई यीनीहरु बदमासै हुन, ठग नै हुन भन्ने छ । हामीले राम्रो तथा सकारात्मक कुरा गर्दा पनि त्यसलाई नकारामकरुपमा लिने प्रचलन नै भइसक्यो । हामीलाई पनि त चिन्ता छ नि वैदेशिक रोजगारलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भनेर । रातदिन यही पेशालाई कसरी मर्यादित बनाउने भनेर छलफलमा बसेका छौ । तपाईलाई भर्खरै अफगानिस्तानमा घटेको घटनाको बारेमा भनौ, मेनपावरले पठाए भनेर हल्ला मच्चाइयो । अवैधरुपमा भारतबाट नेपालीहरु अफगानिस्तान पुगिरहेका छन् । २ वर्षपछि स्वदेश फर्किएर रिइन्ट्री लिएर फेरी उनीहरु अफगानिस्तान जान्छन अनि दोष जति मेनपावरलाई । तिनलाई पहिले नै छानविन गर्नुपर्दैनथ्यो ? त्यो पनि नगर्ने । अनि दुर्घटना भयो या केही घटना घट्यो भने बन्दको नाटक गर्ने । पपुलारिटि कमाउने काम मात्र हुन्छ । जसरी अहिले अफगानिस्तानसहित ४ वटा देशमा प्रतिवन्ध लगाइएको छ अब हेर्नुस झन हजारौको संख्यामा नेपालीहरु ति देश जान्छन । अब यस्ता कुरामा मन्त्रालय तथा मन्त्रीपरिषद व्यवसायीसँग छलफल नै नगरी निर्णय गर्छ भने हामीले के भन्ने ।
अब छलफलको कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि ३१ बुदे सहमतिदेखि अहिले आएर बायोमेट्रिकको विषयमा मन्त्री, सचिव सबैसँग छलफल भैरहेको छ । तर नियतै ठिक नभएपछि के गर्ने छलफल मात्र गरेर । मन्त्रीज्यूको नीयत नै ठिक देखिएन । मन्त्रीको कुर्सीमा कहिलेसम्म हो भन्ने भएपछि कसरी कुम्ल्याउन सकिन्छ भन्ने तिर उहाँ लाग्नुभएको छ । मैले यसो भनिरहदा हेर्नुस अबको १०/१५ दिनमा तपाईले केही न केही नतिजा थाहा पाउँनुहुन्छ ।
नतिजा भन्नाले के कुराको संकेत गर्न खोज्नुभएको हो ?
यहाँ केही न केही सेटिङ छ । चाहे बायोमेट्रिक या त माइग्रामको नाममा केही न केही सेटिङ छ । यो लागू गर्नु हँुदैन भनेर हामी यसको विरोध गरिराखेका छौं । यसबारे मन्त्रालयलाई घच्घचाइरहेका छांै । अब हेर्दै जानुस मन्त्रीज्यू मलेसियाबाट फर्केपछि तपाईहरुलाई नै बोलाएर भन्नुहुन्छ, यो बायोमेट्रिक, माइग्राम त्यहाँकै सरकारले लगाएको रहेछ भनेर । किनकि त्यहाँका र यहाँका दलालबाट ठुलै पैसा मन्त्रीले भेटिसकेका छन् । केही कमिशन मिलाउन मात्र अहिले मन्त्रीज्यूको भ्रमण भएको हो ।
सबै कुरा थाहा रहेछ त तपाइलाई ?
सबै कुरा थाहा हुँदा हुँदै पनि निरिह छौ हामी । के गर्ने हामी मन्त्री, सचिव परेनौ । हाम्रा मान्छे मन्त्री, सचिव छैनन् । तर अब हामी चुप लागेर बस्दैनौ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रीले गरेका गलत कामको पर्दाफास गरेरै छाड्छौ । यो देशमा मन्त्रीभन्दा पनि माथि कोही त होलान् नि । अब हामी प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, शिर्षदलका नेता सबैलाई भेटेर श्रम मन्त्रीले गरेका नीतिगत भ्रष्टाचारको पर्दाफास गर्छौ ।
मलेसिया रोजगारीमा देखिएका यी समस्या त धेरै पहिले देखिका हुन् । मन्त्रीनै कमिशनमा लिप्त रहेको भनाइ राखिरहनुहुँदा तथा मलेसिया रोजगारीमा धेरै नै समस्या आइरहँदा कामदार पठाउन किन बन्द गर्नुहुन्न तपाईहरु ?
अब बन्द गर्दा पनि अलि नकारात्मक असर पर्न सक्छ । जाने कामदार र तीनको परिवारको रोजिरोटीको पनि सवाल छ । हुनत हामी व्यवसायीबीच पनि मलेसिया कामदार पठाउन बन्द गर्ने विषयमा छलफल भैरहेको छ । मलेसिया रोजगारीको नाममा कामदार ठग्ने अनेक प्रविधि ल्याइन्छ । हुनत हाम्रै व्यवसायीहरुको पनि मिलेमतो छ यसमा । कुनै नयाँ मन्त्री, सचिव, डिजी आउँदा पहिला तिनै व्यवसायी गएर पढाउँछन् । खराब त हाम्रै व्यवसायी पनि छन् । अझ पछिल्लो समय त स्वास्थ्य क्षेत्रका केही दलाल र मलेसियन दलालले गर्दा नेपाली कामदारलाई झन आर्थिक भार थोपर्ने काम भैरहेको छ । मलेसिया सरकारको नाममा कामदार ठग्ने अनेक खेल हुन्छ । कहिले विदेशी कामदार नलिने भनेर तर्साइन्छ । कहिलेसम्म तिनको हेपाई सहेर बस्ने । म त भन्छु २/४ महिना नेपाली कामदार मलेसिया पठाउन बन्द गरेर हेरौ । यदी यो बीचमा दुई देशबीच नै सम्झौता गरेर केही राम्रा काम भएभने नेपाली पठाऔ होइन भने एउटा मलेसिया बन्द गर्दैमा केही फरक पर्दैन ।
त्यसो भए यी समस्याको निकास चाँहि के हो त ?
निकास त हेर्नुस पहिलो कुरा मन्त्रीको मन सफा हुनुप¥यो । नेपाली कामदार सस्तो र सुलभ लागत लिएर पठाउनुपर्छ भनेर मन्त्रीले सोच्नुपर्छ । भाषण गर्दा नेपाली कामदार ठगिनु हँुदैन, कामदारसँग लाखौ रुपैया लिइएको छ भनेर व्यवसायीहरुलाई गाली गर्ने अनि प्रत्येक दिन विदेशिने नेपालीको थाप्लोमा ऋणको भार थोपर्दै जाने निर्णय गर्ने मन्त्री ठग हुन कि हामी ? त्यसकारण नीतिगत निर्णय गरेर जसरी नेपाली कामदार ठग्ने काम भैरहेको छ यसले मन्त्रीको नियत स्पष्ट हुन्छ । बायोमेट्रिक र माइग्रामको नाममा कुनै निर्णय नगरेर डलर पचाउने काम मन्त्रीज्यूले गरिराख्नुभएको छ यी र यस्ता काम तुरुन्त बन्द गरुन । बायोमेट्रिक, भिएलएन, माइग्रामलगायतलाई तत्काल बन्द गर्ने नीतिगत निर्णय मन्त्रीले गरेनन् भने उनी भ्रष्ट हुन भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
प्रस्तुती : दिनेश लुइटेल
ganesh khadka, itahari
Malysia pathauna nai pahila banda garnu parchha duniya ko name liyera garib thagne jun kam vairaheko chha yo kehi dalal maphiya harule garda arthik chalkhel garera garib lai lutne kam turunta banda garnu parchha